Romaan (Romaania Listeni [Romuusia Listeni [romɨni.a]) waa gobol madax bannaan oo ku yaal bartamaha bartamaha, bariga, iyo koonfur-galbeed ee Yurub. Waxay xuduud u tahay badda madow, Bulgaria, Ukraine, Hungary, Serbia, iyo Moldova. Waxay leedahay aag 238,397 square kilomitir (92,046 sq mi), taas oo ka dhigeysa kii labaatanaad ee ugu weynaa Yurub. Waxay leedahay cimilo badan oo dabiiciga ah oo cimilada ah oo leh qaar ka mid ah Oceanic, Mediterranean, iyo xitaa saameynta xilliyada Scaninavian-Baltic. Ku dhowaad 20 milyan oo qof, waddanku waa gobolka toddobaad ee ugu badan ee ka mid ah Midowga Yurub iyo tobankii guud ee Yurub. Magaalada caasimadda ah iyo magaalada ugu weyn, Bucharest, waa magaala lixaad ee ugu weyn Midowga Yurub iyo tobanka tobnaad ee ku yaala qaarada yurub, iyadoo 2,106,144 degganaa laga soo bilaabo 2016;  magaalooyinka kale ee waaweeyn waxaa ka mid ah Iaşi, Timishoara, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, iyo Galaţi. Webiga River Danube, oo ah webiga labaad ee ugu dheer Yurub, wuxuu kordhay jarmalka, wuxuuna u dhexeeyaa jihada koonfur bari ee 2,857 km (1,775 mi), isagoo ku weheliya toban waddan kahor inta uusan faaruqin Danube Delta. Buuraleyda Carpathian, oo ka soo jeeda waqooyiga galbeedka ilaa koonfur galbeed, waxaa ka mid ah Moldowanu oo ah 2,544 m (8,346 ft).  Modern-ka Romania waxaa la aasaasay 1859 iyada oo loo marayo urur shaqsi ah oo ka mid ah Maamullada Danubiyaanka ee Moldavia iyo Wallachia. Gobolka cusub, oo si rasmi ah loogu magacaabay Romania tan iyo 1866-kii, ayaa xor ka ah Boqortooyadii Boqortooyada ee 1877. Dhamaadkii Dagaalkii Dunida I, Transylvania, Bukovina iyo Bessarabiya waxay ku midoobeen boqortooyada Boqortooyada Roomaaniya. Intii lagu jiray dagaalkii labaad ee dunida, Romania waxay ahayd xulafada Nazi Jarmalka ee ka soo horjeeda Midowgii Soofiyeetka, iyagoo la dagaallamaya dhinaca Wehrmacht ilaa 1944-kii, markii ay ku biireen awoodda Allied iyo inay la qabsadeen xoogagga Ciidanka Xoogga. Romania waxaa laga badiyay dhulal badan, oo waqooyiga Transylvania dib loo soo celiyay dagaalka. Dagaalka ka dib, Romania waxay noqotay Jamhuuriyad bulshadeed oo xubin ka ah Warsaw Saxiixa. Ka dib Kacaanka 1989, Romania waxay bilowday in ay u gudubto dimuquraaddiyadda iyo dhaqaalaha suuqa dhaqaalaha.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Romania&oldid=192643"